Safarkii adkaa ee Amina - Telling the Real Story
Safarkii adkaa ee Amina
“Waxaan ka xumahay dadka soo tahriibaya hadda, waxaan ogahay dhibaatooyinka soo wajihi karaan. Waxaa laga yaabaa in ay la kulmaan dhibaatooyinkii aan la kulmay ama kuwo ka xun” ayay tiri Amina oo ka waramaysa tacadiyadii ay kula kulantahay tahriibka Yurub.
Amina waxay ku noolahayd tuulo yar oo ku taala Somalia halkaasoo ay ku lahayd ganacsi, halka seygeeda uu ahaa macalin luuqada Ingiriiska. Si la mid ah tuulooyinka kale, ayaa tuuladooda waxaa qabsaday Al-shabaab kuwaasoo iskuulada ka mamnuucay in lagu dhigo Ingiriiska iyo in dumarku ay ganacsi yeeshaan. Sharciyada cusub ayaa Amina seygeeda ka dhigay shaqo la’aan, inkastoo dhowr jeer la xiray ayay Amina sii wadatay ganacsigeeda maadaama uu ahaa isha dhaqaalaha ee qoyska.
Waxay dhibaato la soo daristay markii Al-shabaab ay ku xukumeen dil maadaama ay ka amartiiday. Iyadoo go’aan ku gaadhay in ay baxsato oo tahriibto kaasoo aysan wax macluumaad ah ka haysan.
“Waxaan doonayay in aan gaaro wadan nabad ah sidaas ayaan Somalia uga soo tagay” ayay tiri.
“Ma ogeyn in aan dhibaato la kulmi doono.”
Iyadoo ka soo tagtay reerkeeda oo wadata wiilkeeda yaraanka ah, ayay Amina ka soo baxday aqalkeeda xili habeen ah, iyadoo aan ogeyn goorta ay arki doonto seygeeda iyo caruurteeda kale.
Iyadoo aan dhaqaale fiican haysan oo caawimaad ka helaysa muqalasiin ayay soo gashay Addis Ababa halkasoo ay wiilkeeda uga tagtay haweenay Somali ah maadaama ay dareentay in tahriibku uusan ku habooneyn caruurta, iyadoo u safartay Libya.
Markii ay Libya soo galeen ayaa Amina iyo 50 qof oo kale waxaa la geeyay goob aan la aqoon oo saxaraha ku taala. Halkaasoo ayaa lagu haystay iyagoo lagu sameeyay jirdil badan oo xitaa labo qof ay u geeriyoodeen dhaawacyadii soo gaaray.
“Waxaan seexanaynay bacaadka, ma aanan haysan joodari…waxba ma aanan haysan” ayay xasuusataa. “Habeenkii waa qaboow, maalintiina waa kuleyl. Waxaan lugaha iyo gacmaha ku xabaali jirnay bacaadka si aan uga gaashaamano qabowga. Habeenkii waxaan seexan jirnay sida anaga oo qabri ku jirna” ayay ku dartay.”
Daawo Amina oo ka waramaysa safarkii Somalia iyo 24-tii maalmood ee saxaraha lagu haystay.
Ka dib markii la soo daayay, ayaa Amina iyo dadkii la socday lagu wareejiyay koox kale oo muqalasiin ah kuwaasoo u kexeeyay magaala xeebeedka Tripoli halkaasi oo ay ka raaci lahaayeen doonta. Markii ay soo galeen magaalada, ayaa markale la qabsaday, iyadoo baxsatay markii lagu amray in ay wehliso labo haween ah oo lugaha ka dhaawacmay ka dib markii ay ku guul dareysteen in ay baxsadaan.
Amina waxay sii wadatay safarkii badda. Iyadoo ku guuldaraystay labo goor oo doontii ay la socotay ay dib ugu soo noqotay Libya ka dibna xabsiga la dhigay dowr bilood isla markaana lagu shaqaysan jiray. Waxay ku guuleysatay markiii sadexaad oo ay doonta raacday.
“Haddii aan kala dooran lahaa in aan Libya ku laabto iyo in aan badda ku dhinto, waxaan dooran lahaa in aan badda ku dhinto halkii aan gali lahaa xabsiga Libya.” ayay tiri.
Daawo Amina oo ka waramaysa labadii sanno ee ay ku noolayd Libya.
Markii badda laga soo badbaadiyay ayaa Amina la geeyay xero qaxooti halkaasi oo ay ka baxsatay. Iyadoo caawimaad ka helaysa Soomaali kale ayay bas ka soo raacday Talyaaniga iyadoo u socota Austria halkaasi oo la geeyay xero qaxooti oo ku taala magaalada Vienna oo ay magan-galyo ka dalbatay.
Amina waxay rajaynaysaa in lala mideeyo caruurteeda, iyadoo doonaysa in ay bilowdo codsiga mideynta qoyska labo sanno gudaheed.